China pp lukathayela isitoreji yezinyoni Umkhiqizi kanye Umthengisi | Sihai
Kk storages lukathayela yezinyoni yenziwa pp can metal, ibhodi lukathayela udonga futhi ungqimba pad for yezinyoni isitoreji, ngokusho ezahlukene usayizi yezinyoni, kk ishidi eziyize kungenziwa egcizelele wenza usayizi ohlukile, kk ishidi lukathayela futhi kungaba phinda, ibhodi likathayela eline-wall-wall liphelele ekuvikeleni imikhiqizo lapho lihamba nenzuzo. Kk lukathayela isitoreji yezinyoni futhi ukusonga ishede yezinyoni, uvemvane yezinyoni, yobuciko yezinyoni esiqinile, inzuzo ishede yezinyoni, yezinyoni yezinyoni, njll. ukusetshenziswa kwezimboni ezifana nezimoto, izinto zasendlini, imishini, i-hardware, eYurophu nase-United States naseJapan, eTaiwan nakwezinye izifunda kusetshenziswe kabanzi.
Izinto ezisemqoka ze-pp eziyize isitoreji yezinyoni kukhona ongaphakeme carbon yensimbi wire futhi kk ibhodi lukathayela. Lapho ikheji lokugcina lingenalutho, lingasongwa futhi ligcinwe ukuze kusetshenziswe ngokugcwele isikhala. Njengamanje, ikheji lokugcina selibekeke ngokuphelele, ligoqeka futhi liyakwazi ukuhanjiswa, futhi seliya ngokuya laba yisiqukathi esibalulekile sokusetshenziswa kwempahla.
Kk Hollow Ipuleti isitoreji isitoreji yezinyoni izici isakhiwo:
1. Ukucaciswa okuhlanganisiwe, umthamo ongaguquki, isitoreji esicacile, okulula ukugcina impahla.
2. I-Forklift, i-lift ne-crane ingasetshenziselwa ukustaka izingqimba ezine komunye nomunye ukuthola isitoreji esima-ntathu.
3. Ukusebenza okulula, ukusetshenziswa okubanzi nempilo ende yokusebenza.
I-4, ukusetshenziswa kwensimbi eqinile yensimbi yokuthinta insimbi, phansi kokuqiniswa kwe-U-channel welding, isakhiwo esiqinile.
5. Nge-forklift, i-trolley, iloli le-hydraulic pallet neminye imishini, ingasetshenziselwa ezokuhamba, ukuphatha, ukulayisha kanye nokwehlisa, ukugcina nezinye izixhumanisi ze-logistics.
6.p ozwakala isetshenziswa njengoba liner ukuvimbela ukuvuza izinto ezincane kanye nokuvikela ukulayishwa workpiece.
Langaphambilini pp ishidi likathayela nge-eva, epe foam
Olandelayo: pp ibhokisi lukathayela lukathayela ngozimele